Steve Wozniak: Apple abụghịzi ụlọ ọrụ ọ dịbu Esi m mac
Mgbe Steve Jobs y Steve Wozniak jikọtara iji wuo Apple, ha enweghị ebumnuche ire elekere ejiji. "Nke a abụghị ụlọ ọrụ na Apple bụ na mbụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na n'ezie gbanwere ụwa"Wozniak kwuru na nyochaa na nso nso a Reddit mgbe a jụrụ ya gbasara Apple Watch.
Steve Wozniak nwere Apple Watch, ma na-egosikarị iyi otu. Na ngosipụta na nso nso a na 'Conan', yi ụdị igwe anaghị agba nchara na a Milanese eriri. Mana Woz ka edoghị anya ma Apple ọ ga - abụ onye na - eme ihe nkiri na - aga nke ọma.
Enwere m obere nchegbu banyere okwu a, enwere m mmasị na Apple m, mana ọ dugara anyị n'ahịa ọla ebe ịzụrụ elekere maka ihe dị ka $ 500 na $ 1100 na-agwa gị ọtụtụ ihe dịka mmadụ.
Naanị ihe dị iche bụ eriri na nche niile. Anya iri abụọ site na $ 500 ruo $ 1100. Naanị ihe dị iche bụ eriri? Ọfọn na nke a abụghị ụlọ ọrụ na Apple bụ na mbụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na n'ezie gbanwere ụwa.
N'ezie, ọ dobeghị anya etu etu ihe ịga nke ọma nke otu a siri dịrị Apple. Companylọ ọrụ nke Cupertino egosighi kpọmkwem elekere ole o rere, yabụ na anyị nwere ọnụ ọgụgụ ahịa na-enweghị ikike.
Dabere na ihe omumu Canalys ohuru, gburugburu 7 nde Apple ese e rere ha n’etiti November gara aga na mbido ha ọnwa isii gara aga. Nke ahụ bụ nnukwu ọgụgụ maka ngwaahịa ọgbọ mbụ.
Enwere m nkwado maka Tim Cook, n'ihi na oge ọ bụla anyị nwere mmelite iOS ọhụrụ, enwere m obi anụrị n'ihi na ha na-eme ihe na-emetụta ndị mmadụ, Wozniak kwuru. Dị ka ịnyefe oku site na ekwentị gaa na kọmputa, wdg. Ọbụna m hụrụ Airplay n'anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Steve Wozniak: Apple abụghịzi ụlọ ọrụ ọ na-adịbu
Ọ bụ nnọọ ihe ziri ezi n'ụwa !!!
Zaghachi Adriana Si Vasi Sibisan
O doro anya !!!! ọ bụrụ na amamịghe apụla !!!!
Zaghachi Claudio Peña
Ọ dị ka ịpụ Messi na Barcelona, ​​Mick Jagger si na Nkume! Ihe gbanwere. Ọrụ bụ Ọrụ.
Zaghachi Sebastian Cima Gaviño
Jose Fco Nkedo dijo
Naanị ihe fọdụrụ bụ iphone na ipad. Ezumike ahụ. Echere m na ụfọdụ dị oke ọnụ ma ndị ọzọ adịghị nwayọ
Zaghachi Jose Fco Cast
Ebe ọ bụ na ọgụgụ isi ahụ apụla, ụlọ ọrụ agbanweela mgbanwe dị egwu.
Zaghachi ka Raul Frias Saiz
The iPhone Gha na iPad Pro 9,7 ", OS X 10.11.4 na iOS 9.3, isi okwu nke Machị 21 na ọtụtụ ndị ọzọ. Kachasị mma nke izu na m si Mac
Etu ibudata Onebọchị Otu 2 maka n'efu ma chekwaa € 4,99